Global Voices teny Malagasy » Miady amin’ireo fanafody hosoka amin’ny alalan’ny sehatra antserasera vaovao ny startup teknolojia ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 5:08 GMT 1	 · Mpanoratra Goodhope Amani Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Mainty, Tanzania, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Frank Arabi (ankavia) manazava ny dingana rehetra hahazoana fanafody eny amin'ny PharmLinks. Sary: ​​Goodhope Amani, nahazoana alalana.
Nofiratsy misy fiantraikany amin'ny olon-drehetra manerantany ny olana amin'ny fanafody hosoka – ka anisan'izany i Tanzania. Raha nametraka fitsipika  momba ireo orinasan'ny fanafody ny governemanta, dia mbola misy ny tandrevaka ahafahan'ny olona mivarotra fanafody sandoka amin'ny aterineto sy any amin'ireo magazay noho ny tsy fisian'ny fanamarinana alohan'ny hidiran'ny fanafody eny an-tsena.
Ankehitriny, dia misy ny sehatra antserasera iray antsoina hoe PharmLinks , naorina tany Tanzania, izay te-hampitsahatra ny krizy amin'ny fanafody hosoka. Mampifandray ireo mpamatsy fanafody sy ireo mpivarotra ambongadiny amin'ireo mpaninjara any Tanzania ity tranonkala ity, mba hividianana vokatra tsara kalitao avy amin'ireo fivarotam-panafody ara-dalàna ary manaramaso ny tsena ihany koa.
Frank Arabi , mpianatra mpitsabo ao amin'ny Oniversiten'i Muhimbili momba ny Fahasalamana sy ny Siansa, no anisan'ny niara-nanorina ny PharmLinks  rehefa nahatsikaritra ireo fanamby maro atrehan'ny indostrian'ny fanafody any Tanzania izy, ao anatin'izany ny olana amin'ny fahazoana fanafody, izay miteraka fepetra tonga lafatra ho an'ny orinasam-panafody hosoka.
Frank Arabi, mpianatra ara-pitsaboana sy mpiara-manorina ny Pharmlink. Sary: ​​Goodhope Amani, nahazoana alalana.
Namolavola rafitra an-tserasera iray hanamorana ny fahazoana fanafody sy hiadiana amin'ny fanafody hosoka amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso akaiky ireo orinasa mandritra ny fizotran'ny famatsiana i Arabi sy ny ekipany.
“Manome lisitra misy ireo farmasia isan-karazany, ny fanafody sy ny vidiny ny tranonkala. Manome fanadihadiana ara-barotra izy ary manome fahafahana ho an'ireo mpampiasa farany mba hanamarina ny fanafody ihany koa ny fitantanana tahiry. Noho izany dia rafitra sarotra ahitana vahaolana isankarazany izany, ”hoy i Arabi tamin'ny tafatafa nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Natomboka tamin'ny taona 2018 ary mbola ao anatin'ny dingana fitarihana, fivarotam-panafody 35 ankehitriny no afaka miditra malalaka ao amin'ny tranokala sy mikaroka ny vokatra ara-pitsaboana tadiaviny ao amin'ny fivarotany. Mitondra azy ireo any amin'ireo mpamatsy mpivarotra ambongadiny sy ireo magazay ho an'ny fiarovana ary manome ny lisitry ny vidin'ny entana tsirairay ny rafitra. Afaka misafidy ireo entana araka izany ny mpividy ary mandoa vola an-tserasera, ka tsy ela dia voaatitra entana.
Mifanehatra amin'ny fanafody hosoka
Vadium Majula, mponin'i Dar mahatsiaro ny andro saika nampiasain'ny anabaviny ny fanafody hosoka rehefa avy nividy izany tany amin'ny fivarotam-panafody iray tao Dar es Salaam, Tanzania. Soa ihany, fa nisy olona iray tao amin'ny fianakaviana nahafantatra mialoha fa hosoka ilay fanafody rehefa nanamarina ny laharan'ny seria sy ny akora.
“Ny ankamaroantsika dia tsy mahalala izay tena orizinaly sy tsy orizinaly. Mieritreritra aho fa ireo tompon'andraikitra, angamba ireo mpivaro-panafody no tokony hanome fampianarana momba izay tokony hojerena rehefa mividy na mampiasa fanafody manokana,” hoy i Majula.
Milaza ny Fikambanana Manerantany ho an'ny Fahasalamana (OMS amin'ny teny frantsay) fa fahafatesana eo amin'ny 100.000 isan-taona ao Afrika  no misy ifandraisany amin'ny fanafody hosoka sy tsy manara-penitra ary mitombo ny tarehimarika.
Mihevitra i Arabi fa olana goavana ny olana amin'ny fanafody hosoka ary mila fomba maro hiadiana amin'izany. “Mitentina 200 miliara dolara  isa-taona ny tsenan'ny fanafody hosoka manerantany,” hoy ny OMS, araka ny notaterin'ny Reuters.
“Heveriko fa tena sarotra sy midadasika ity olana momba ny fanafody hosoka ity, ary mitaky fomba fiasa marobe ka iray amin'izany ny famahana azy avy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotran'ny famatsiana … matoky ny herin'ny fahasalamana nomerika ho amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny vahoakantsika izahay”, hoy i Arabi.
Tamin'ny volana Jona 2019, namoaka fampitandremana momba ny fisian'ny fanafody hosoka ao Tanzania izay mitovy amin'ny Gentrisone, fanafody lakiremy ampiasaina amin'ny aretina azo avy amin'ny bakteria ny governemanta tamin'ny alàlan'ny Fahefana Misahana ny Fanafody sy Fitaovana Ara-Pitsaboana (TMDA) . Nanambara ny fampitam-baovao eny an-toerana , Daily News fa fantsona 4.118 no hita tany amin'ireo faritra enina samy hafa ao Tanzania.
Mifandray amin'ireo fivarotam-panafody am-polony ao Dar es salaam, toeran'ny fandraharahana ao Tanzania ankehitriny ny pharmlink, ary manantena ny hifandray amin'ny olona an-jatony maro amin'ny taona ho avy.
Miatrika fanamby marobe ny farmasia ao Tanzania, ao anatin'izany ny varo-maizina izay ahafahan'ny olona mividy fanafody eny an-dalambe ary tsy mila taratasy avy amin'ny dokotera.
Ao amin'ny Tandale Street, 3 kilometatra miala ny afovoan-tanànan'i Dar, miaiky i Hawa Alex Dagaa, izay manana fivarotam-panafody fa mividy vokatra fanafody avy amin'ny olona tsy manana fahazoan-dàlana hivarotra izany ny olona sasany, satria mivarotra ny vokatra amin'ny vidiny mora kokoa izy ireo.
“Mividy vokatra fanafody avy amin'ny olona mivarotra azy io eny amin'ny manodidina ny olona sasany satria mora ny vidiny, saingy indraindray sarotra ny miantoka ny maha-tena izy ilay fanafody.”
Hawa Alex Dagaa ao amin'ny fivarotam-panafodiny any Tandale, Dar es salaam, faly taorian'ny fampahafantarana azy momba ny rafitra an-tserasera izay manampy amin'ny fahazoana fanafody tsara kalitao. Sary: ​​Goodhope Amani, nahazoana alalana.
Matoky i Dagaa fa tsy hitsitsy fotoana fotsiny na ampiasaina hitadiavana magazay mivarotra fanafody amin'ny vidiny mirary ny rafitra antserasera vaovao, fa koa hanampy hanara-maso ireo vokatra fanafody apetraka eny an-tsena, mampihena ny fividianana fanafody hosoka.
“Noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana, dia mitaky fotoana be ny fitadiavana fanafody… vokatra ara-pitsaboana ho an'ny fivarotam-panafodiko ao an-tanàna, saingy noho ity rafitra ity, dia afaka miditra ao amin'ny tranonkala ianao, mametraka ny entana afaranao, mandoa vola ary manatitra izany izy ireo avy eo,” hoy izy nanampy.
Tsy ny Pharmlinks ihany no sehatra nomerika mifantoka amin'ny fiadiana amin'ny fanafody hosoka ao Afrika. Tamin'ny taona 2018, natsangana ny sehatra iray ao Nizeria, medsaf , mba hiadiana amin'ireo fanafody hosoka mivezivezy ao amin'ny firenena Afrikanina Andrefana, ary misy ihany koa ny FarmaTrus  ao Ghana.
Miara miasa akaiky amin'ny filan-kevitry ny farmasia ao Tanzania, izay tompon'andraikitra amin'ny fandraketana ireo fivarotam-panafody sy ny mpiasan'ny farmasia, miaraka amin'ny TMDA ny Pharmlinks mba hiantohana fa haharitra ity rafitra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/144398/
 fahafatesana eo amin'ny 100.000 isan-taona ao Afrika: https://www.un.org/africarenewal/magazine/may-2013/counterfeit-drugs-raise-africa%E2%80%99s-temperature
 200 miliara dolara: https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-fake-drugs/drugmakers-say-uk-could-lose-out-on-eu-counterfeit-drugs-push-idUSKCN1PX003
 fampitam-baovao eny an-toerana: https://dailynews.co.tz/news/2019-07-185d3032ecde003.aspx